माधव नेपाल फकाउदै ओली, तीनघन्टा भेटवार्ता ! माधव नेपाल फकाउदै ओली, तीनघन्टा भेटवार्ता !
माधव नेपाल फकाउदै ओली, तीनघन्टा भेटवार्ता !
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स सहयोगी — 10/29/2020 07:16:00 am 0
प्रकाशित: कार्तिक १३, बिहिबार, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार (हिजो) भएको भेटमा पार्टीमा देखिएको पछिल्लो विवादका विषयमा छलफल भएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग दूरी बढेसँगै ओलीले भेटवार्ताका लागि नेपाललाई बालुवाटार बोलाएका थिए । भेटवार्ताका क्रममा ओलीले पार्टीमा मिलेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेता नेपालले विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि कात्तिक ४ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । कात्तिक ४ गतेको भेटवार्तामा पनि ओलीले मिलेर जानका लागि वरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डसँग अघिल्लो मंगलबारदेखि संवादहीनताको अवस्था उत्पन्न भएपछि ओलीले नेता नेपालसँग छलफल थालेका छन् ।